६ महिनामात्र थपियो हैटीको टीपीएस अवधि, नेपालको थपिएला ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
६ महिनामात्र थपियो हैटीको टीपीएस अवधि, नेपालको थपिएला ?
अमेरिकामा बस्दै आएका भूकम्प प्रभावित हैटीका नागरिकका लागि अमेरिकी सरकारले प्रदान गरेको टीपीएस (टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस ) को अवधि जम्मा ६ महिना अर्थात् सन् २०१८ को जनवरीसम्मको लागि थपिएको छ ।
सन् २०१० को जनवरीमा हैटीमा गएको भूकम्पपछि अमेरिकामा रहेका हैटीका नागरिकका लागि अमेरिकी सरकारले प्रदान गरेको टीपीएस (टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस ) प्रदान गरेको थियो, जसका कारण अमेरिकामा रहेका कागजपत्रविहिन हैटीका नागरिकहरुले अमेरिकामा बसेर काम गर्ने अनुमति पाएका थिए ।
अमेरिकाका उपयुक्त सरकारी एजेन्सीहरुसँगको छलफलपछि हैटीका लागि टीपीएसको अवधि थपिएको अमेरिकी सरकारले जनाएको छ । सन् २०१८ को जनवरी २२ मा टीपीएसको अवधि सकिनुभन्दा ६० दिन अगाडि पुन थप्ने वा नथप्ने भन्ने विषयमा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका सेक्रेटरीले मुल्यांकन गर्ने जनाइएको छ ।
लामो समयको अन्यौलपछि हैटीका लागि टीपीएसको अवधि जम्मा ६ महिना थपिएको हो । नेपालका लागि टीपीएसको अवधि १८ महिना थपिएको थियो जुन सन् २०१८ को जुन २४ मा सकिदैछ । भूकम्पप्रभावित हैटीको टीपीएस अवधि जम्मा ६ महिनामात्र थपिएकाले नेपालको अवधि पुन थपिनेमा आशंका जन्मिएको हो ।
अमेरिकामा ८ हजार ९ सय ५० जना नेपालीहरु टीपीएसबाट संरक्षित छन् । टीपीएसको अवधि नथपिएमा अन्य कानुनी स्टेटसका लागि आवेदन नदिएका वा नपाएका नेपालीहरुले पनि सन् २०१८ को जुन २४ पछि अमेरिका छाड्नुपर्नेछ ।
यस अगाडि टीपीएस प्राप्त गायना, लाइबेरिया र सिरिया लिओनका नागरिकलाई अमेरिकामा प्रदान गरिएको टीपीएसको अवधि थपिएको थिएन, जुन गत मे २० बाट सकिएको थियो ।
इबोला भाइरसका कारण ती देशका नागरिकहरुलाई अमेरिकामा टीपीएस प्रदान गरिएको थियो । तर अब इबोलाको खतरा नरहेको भन्दै टीपीएसको अवधि थपिएन । टीपीएसको अवधि नथपिएपछि टीपीएस प्राप्त ती देशका नागरिकहरु अमेरिकामा समस्यामा परेका छन् ।
सिरिया लिओनका ११८० जना, गायनाका ९३० जना र लाइबेरियाका २१६० जनाले अमेरिकामा टीपीएस लिएका छन् ।